VZ Navigator ... Enwere m GPS ... Ugbu a, gini?! | Martech Zone
VZ Navigator… Enwere m GPS… Ugbu a, gini?!
Tuesday, August 28, 2007 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Ogologo akụkọ - mkpụmkpụ - ekwentị m mebiri. Nke ewepu, nwere mkpuchi, bụ $ 50 na ekwentị ọhụrụ enyere GPS bụ $ 30. Ihe omumu mutara - Agaghị m enweta mkpuchi ekwentị ọzọ.
Ka o sina dị, enwere m obi ụtọ ịnweta ekwentị ejiri GPS. Mara na m kwuru, 'enyere'. Na eziokwu Verizon Ikuku ejiji, nke ahụ pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla na ihe niile. Ọ na-ekpuchi ngwugwu GPS, nke a na-akpọ VZ Navigator bụ $ 9.99 kwa ọnwa maka ndenye aha. Abụ m GIS aku ka m wee nwalee ya.
Ọ na - apụta (ma nweere onwe gị idozi m ma m mehie), nke a na - enye m ohere ịme ihe ole na ole:
Lee ebe m na maapụ dị n'ịntanetị naanị m nwere ike ịnweta ma ọ bụrụhaala na m nyere onwe m ikike. (huh?) Lelee nseta ihuenyo n'okpuru… Echere m na m nọ n'ụlọ!
Lee ebe m na maapụ na ekwentị m.
Zipu ekwentị ọzọ ọnọdụ m site na ozi ederede (ụgwọ ozi ederede) ma naanị ma ọ bụrụ ha na Verizon dịkwa.
Budata usoro site na ekwentị m (ọ bụghị site na weebụsaịtị VZ Navigator). Ọ dị ezigbo mfe na ihu ọchị ahụ, weeny.
Chọọ maka ihe ndị dị nso na maapụ dị na ekwentị (yabụ Verizon nwere ike ịnweta ego mgbasa ozi maka ọrụ a na-akwụ ụgwọ m chere).
Yabụ… ọ bụrụ na m nwụrụ n'ụgbọala ọkụ na-enwu ọkụ si n'ọhịa ọka naanị m, 9-1-1 nwere ike ịchọta m. Ma obu ikekwe oburu na ndi ochichi choro m, ha nwere ike ichota m. Ma ụmụ m? Nope. Ha enweghị ike ịchọta m n'ihi na enweghị m ike ibipụta ebe m na-akpaghị aka na mpụga ọrụ Verizon's VZ Navigator.
Verizon… onye ọ bụla na Verizon… ma ọ bụrụ na ị na-agụ nke a… gịnị mere na ị naghị emeghe nke a maka oriri ọha?! O buru na m choro ebe m di n’uwa, ekwesịrị m itinye ya n’ihu ọha. Ọbụna nke ka mma, ekwesịrị m inwe ike ịmepụta ngwa na-eji ya. Tolite! Site na imechi teknụzụ ahụ, agaghị m eji anwansi gbalịa ịgwa ndị enyi m niile ka ha gaa Verizon ka anyị nwee ike zigara ibe anyị eserese ngosi. C'mon!
Ndakpọ olileanya ọzọ nke ọtụtụ ndị na-eweta ọrụ m. Kedu mgbe m ga-amụta?
Daalụ ịdị mma maka ụda AC / DC, ma ọ bụghị na m ga-enwe mmechu ihu kpamkpam.
Soro na Ahịa Browser Market Share si Colts.com
Aug 29, 2007 na 12:56 PM
GPS bụ ihe efu, belụsọ ma ọ nọ n'ụgbọ ala gị. Enwere m ya na ekwentị m, ọ dịbeghịkwa mgbe m gbalịrị iji ya. Mana abụ m nwanyị ma mara ebe m nọ. LOL
N'ebe Verizon, agara m agwa gị, ha achọghị ịma banyere gị ma ọ bụ atụmatụ ịzụrụ. Ndị ahịa ha bụ otu ihe jọgburu onwe ya ma a bịa n'ihe banyere ọrụ cellular.
Agaghị m arụ ọrụ ekwentị m ma m ga-ekwu nke a, AC / DC nkume!
Aug 29, 2007 na 3:39 PM
$ 30? Nwa ada m nwanyị dị na fritz, anyị nwere Verizon, na ekwentị dị ọnụ ala m nwere ike ị nweta tupu Jenụwarị mgbe nkwekọrịta ya na-emegharị ihe dịka $ 140… ..a ekwentị ọ kpọrọ "ghetto". Enweghị m ike ikwenye na ekwentị dị oke ọnụ ma ọ gwụla ma oge eruola ka ịmegharị nkwekọrịta gị. Ekwentị ha anaghị adịru afọ 2 ọzọ, ma.
Ya mere, gwa m, olee otu ị ga-esi nweta ekwentị maka $ 30?
Aug 29, 2007 na 7:36 PM
My 'nkwalite n'efu' ga-abụ na Disemba. Nanị m gara ntanetị, họrọ nọmba ekwentị m, wee họrọ ekwentị nkwalite ma nye m ndepụta. Ee, ekwesịrị m ịgbatị nkwekọrịta m - na-agbara ndị a ohu maka afọ ole na ole ọzọ.
Ahapụgoro AT&T na ndị enyi m niile nwere Sprint kpọrọ ya asị… yabụ a hapụrụ m enweghị ụzọ ọzọ.